कांग्रेस किन कमजोर ?
२०७४ मङ्सिर १३ बुधबार १३:१३:००
केही प्रश्नबाट लेख सुरु गरौँ । गौरवमय इतिहास, व्यापक जनधार, कार्यनीति, रणनीति र जनविश्वास हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासीक पार्टीमा किन विचलन आयो ? राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको विष्यमा, पार्टीको दर्शनको विषयमा बीपीको धारणा स्पष्ट थियो । तर, कांग्रेस आज किन स्पष्ट छैन यस्ता विषयमा ? दक्षिण एसियाकै लगभग पुरानो राजनीतिक पार्टीमध्ये यो पनि एउटा हो । यो पार्टी क्रान्तिको पर्याय, प्रजातन्त्रको पहरेदार, खुल्ला समाज र कानुनको शासनको पक्षधरका रूपमा आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि किन कुहिरोमा हराएको कागजस्तो भएको छ ? किन यो पार्टीलाई सत्ता, पद र पैसाको पर्यायका रूपमा हेरिँदैछ ? नेता र नेतृत्वमा किन विचलन ? नेतृत्वले समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
नेपाली कांग्रेस सबै वर्ग र समूहको साझा पार्टी हो । यो सबैको मूल घर हो । साझा सपना हो नेपाली जनताको । तीन करोड नेपाली जनताको स्वामित्व छ यस पार्टीमा । अरू सबै पार्टीको स्रोत पनि कांग्रेस नै हो । यो मुहान हो भन्थे नेपाली कांग्रेसका आदरणीय नेता स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङ । बीपीको स्वर्गारोहण हुँदा म २ वर्षको बालक थिएँ । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहहरूलाई भेट्ने अवसर मिलेन । नेता भीमबहादुर तामाङसँगको छोटो भेटमा उनले भनेको आज पनि सम्झन्छु । आजको नेतृत्वको सैद्धान्तिक विचलन र विलासिता हेरेर उनी भन्थे भुटेको मकै र सातु खाँदै हाम्रा अग्रजले गाउँ गाउँमा पुगेर नाङ्गो खुट्टा हिँडेर बनाएको पार्टी हो यो ।
यो पार्टीमात्रै हैन, चेतना, विवेक र नैतिकताको अर्को नाम हो भन्थे उनी । काँंग्रेस हारे देश हार्छ, प्रजातन्त्र हार्छ । अनि आखिरमा हार्ने त जनता नै हुन् । इतिहासमा कांग्रेस कहिल्यै हारेको छैन । एक थोपा रगत रहेसम्म एउटा अन्तिम कार्यकर्ता रहेसम्म देशको लागि लड्छ यो पार्टी र लड्नुपर्छ भन्थे उनी । तर, कांग्रेसभित्रै कांग्रेस किन भेटिँदैनन् आज ? भ्रष्टाचार र विलासिता किन सामान्य लाग्छन् आज यो पार्टीमा ?
यो देश यति निरीह किन ? पाँच हजार वर्षको इतिहास बोकेको देश हो यो । जनता किन निरीह ? संघीय संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको चुनाव सकिएको छ । संक्रमणकाल समाप्त हुँदैछ । तर, जनता आश्वस्त छैनन् । किन शंका र अविश्वास छ त ? सामाजिक सद्भाव किन भत्किँदै छ त ? राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतले, जनताको साझा पार्टीको हैसियतले र एउटा ऐतिहासिक पार्टीको हैसियतले यी समस्याको निदान नेपाली कांग्रेसले खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ? यो ऐतिहासिक दायीत्व वहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अव नेतृत्वको आँखा खुलोस् । अब आफ्नै गौरवमय इतिहासमा पाइला टेकेर नेपाली कांग्रेसले नयाँ इतिहास बनाउने बाटो तय गर्नुपर्छ । नगरी सुखै छैन, धरै छैन । गरोस् ।
राष्ट्र र जनताको लागि कांग्रेसले इतिहासमा धेरै पटक सती गएकै हो । राष्ट्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, खुला समाजको लागि नेपाली कांग्रेसले जीवनको आहुति दिएकै हो । इतिहास त जिउँदै छ नि त । आफ्नै गौरवमय इतिहासको स्वामित्व लिन किन सक्तैन कांग्रेस आज ? आफैँले गरेको असल कर्मको विवरण जनता समक्ष राख्न किन सक्तैन यो कांग्रेस ? वृद्ध भत्ताको अवधारणा कांग्रेसकै हो जुन दशकौं अगाडि बीपीले नै ल्याएका हुन् । एमालेले त कार्यान्वयनमात्रै गरेको हो । राष्ट्रको ढुकुटीबाट दिने कुरा, आधा पेट खाएर जनताले तिरेको करबाट बाँडिन्छ यो भत्ता तर खड्गप्रसाद ओलीहरू आफ्नै खल्तीबाट निकालेर दिएसरह बखान गर्छन् ।
मेलम्चीको पानीको सपना कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिएका हुन् । जुन आज मूर्तरूप लिने अवस्थामा छ । यो कुरा कांग्रेस किन जनता समक्ष ल्याउँदैन ? आजको गणतन्त्र र संविधान सभाको सूत्रधार पनि कांग्रेस नै हो तर खै स्वामित्व लिएको ? इतिहास तोडमरोड गर्ने, भत्काउने, बटार्ने राष्ट्रद्रोही हुन्, समाजद्रोही हुन् भन्ने जनताले बुझ्नु पर्छ । इतिहास फेर्नेले, भत्काउनेले देश फेर्नेछन्, यसको अस्तित्व नै समाप्त गर्नेछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । अब सम्पूर्ण प्रजातन्त्रका पक्षधर, खुला समाजका पक्षधर र कानुनको शासनका पक्षधर सजग वन्ने समय आयो । कांग्रेसले आफूलाई परिमार्जन गर्दै बह्मअस्त्र चलाओस् । यही हो समय । हैन भने यो पार्टी इतिहासको संग्रहालयमा सीमित हुनेछ ।
एउटा महत्त्वपूर्णप्रश्न : इतिहासदेखि आजसम्म कांग्रेस किन पीडित भयो ? किन पीडित बनाइयो ? यो पार्टी किन अरूको स्वार्थ पूरा गर्ने औजारमात्रै बन्यो ? सोच्नु पदैैन अब ? विसं २००७ सालसम्म एकतन्त्रीय राणाहरूको तारोमा कांग्रेस प¥यो । विसं २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म राजदरबारले पीडा दियो, थुन्यो, अनि मार्यो ।
आफू अनुकूल प्रयोग गर्यो, फुटायो अनि खेल्यो । कथित सशस्त्र युद्धमा पनि पहिलो निसाना कांग्रेस नै भयो । प्रजातन्त्रका पक्षधरलाई छानी छानी मारियो, लखेटियो ।
अनि हजारौंलाई विस्थापित गरियो । कांग्रेस लाई किन पटकपटक मारिन्छ ? किन हुर्मत लिइन्छ ? नेतृत्वले सोचोस् । विदेशी दलाल, नोकरशाही सबैले कांग्रेसलाई प्रयोग गरे, गर्दैछन् । हिजो एमाले र माओवादी दुवैले आफू अनुकूल प्रयोग गरे अनि स्वार्थ पूरा भएपछि छाडि दिए । कांग्रेसलाई थोक पसलजस्तो बनाए, बनाउँदैछन् । कांग्रेस किन अरूको औजार हुन छाड्दैन ? कांग्रेस हिजोदेखि आजसम्म नै पीडित भयो, बनाइयो भन्ने कुरा किन जनता समक्ष जाहेर गर्दैन ? सोचौँ गम्भीर भएर । देश हार्ने सूत्रहरूको बीजारोपण भइसकेको छ । उम्रनु दिनु हुँदैन कांग्रेसले ।
प्रथम चरणको निर्वाचन सकिएको छ । अव दोस्रो चरणको पर्खाइमा छन् जनता । हारजित स्वभाविक हुन्छ निर्वाचनमा । प्रजातन्त्रको मान्यता पनि यही नै हो । कम्युनिस्ट गठबन्धनवाट कांग्रेस केही विचलित भएको भान परेको छ । विचलित हुनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रजातन्त्रका पक्षधरको हार हुँदैन कहिल्यै ।
हारेर पनि जित्ने पार्टी हैन र कांग्रेस ? बहुमत कसैको आउँदैन । यो मेरो विश्लेषण हो । सिद्धान्तमा, निष्ठामा आधारित गठबन्धन भए बहुमत आउन सक्थ्योहोला तर सत्ता स्वार्थको गठबन्धन हो यो । ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ भनेजस्तो हो । यो कुरा चेतनशील नेपालीले बुझेका छन् । खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालको टाउको जोडिएरमात्रै के गर्नु यिनका कार्यकर्ताको जोडिएन भने ? कुरो यसैमा छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनबाट त कांग्रेसलाई नै फाइदा छ । तर, कांग्रेस जोड घटाउ अनि फाइदा र बेफाइदाको राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ । कांग्रेस सिद्धान्तको व्यापारी हैन, खुद्रा पसले हैन भन्ने जनता समक्ष लानुपर्छ । अरूको कारणले कांग्रेस हार्ने हैन हारेमा आफ्नै आन्तरिक कारणले हार्ने हो । चुनावमा हार भएछ नै भने पनि हारलाई पनि सहजरूपमा लिनुपर्छ र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्छ कांग्रेस ।
कम्युनिस्ट गठवन्धनले दुईतिहाई बहुमतको गुड्डी हाँकेका छन् । यो दिवा स्वप्न हो अहिलेको नेपालको परिवेशमा । राजनीति नबुझ्नु हो । राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएका छन् अनि कम्युनिस्ट सरकारको वकालत गरेका छन् । कुन समयमा हिँड्दैछन् यिनीहरू ? के हो राजनीतिक स्थायित्व भनेको ? नेपाली जनता अब मुसरफ, मुगावे, किम र स्टालिन शैलीको स्थायित्व चाहँदैनन् । नेपाली त खुला समाजभित्रको, प्रजातन्त्रभित्र पलाएको, कानुनको शासनभित्र, संविधानवादभित्र फस्टाएको राजनीतिक स्थायित्वको खोजीमा छन् ।
इतिहासको यो कालखण्डमा हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता गम्भीर मोडमा पूगेको छ । जनताले नयाँ तरिकाबाट नसोची हुँदैन अब । देशै नरहे ? यो ठूलो प्रश्न हो । संक्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्य हुन बाँकी नै छ । आउँदो चुनावको परिणामले पनि निकास दिन्छजस्तो लाग्दैन । शान्ति प्रक्रियाको थालनी पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो भने अब यसलाई निचोडमा पुर्याउने ऐतिहासिक दायीत्व पनि कांग्रेसकै हुन्छ । कथित ‘जनयुद्ध’ का हजारौं पीडितलाई न्याय दिने जिम्मा पनि कांग्रेसले नै लिनुपर्छ । अब कांग्रेसले नयाँ सोच, कार्यक्रम र एजेन्डा तय गर्नुपर्छ । पुरानो नीतिले थेग्दैन ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ । पार्टीमा ‘मैमात्र कांग्रेस हुँ’ भन्ने भावना छोड्नुपर्छ । सबल, सक्षम य्वालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । विलासी हुन छोड्नुपर्छ । नेतृत्व र कार्यकर्ता तथा नेतृत्व र जनताबीचमा ठूलो खाडल छ अहिले यस पार्टीमा । जनताको घरदैलो र झुपडीमा हुनुपर्छ कांग्रेस अब । गुटबन्दी र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ । पार्टीभित्रै पनि प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ । भ्रष्ट, स्वार्थी व्यापारी, मण्डले, डन र अपराधीलाई पार्टीमा निषेध गर्नुपर्छ । छन् भने निकाल्नुपर्छ । भिड जम्मा गरेर पार्टी बन्दैन, बलियो हुँदैन । साथसाथै नेता, नेतृत्व र सबैले कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गरेर पार्टी अघि बढाउनुपर्छ ।
दोस्रो, चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै, नारामा मात्रै हैन अब कांग्रेसले नयाँ विकासका मोडेल जनसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । पेस गरेरमात्रै हुदैन । किन र कसरी अनि कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुने र गर्ने भन्ने कुराको पनि विस्तृत योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ । जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा पार्टी अघि बढ्न सक्तैन । अहिलेकै नेतृत्वले निकास दिन सक्तैन । कांग्रेस व्यक्ति हैन । यो समग्रमा जनता हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । नयाँ बौद्धिक क्रान्ति, जनजागरण अभियानलाई कांग्रेसले फेरि सुरु गर्नुपर्छ । नयाँ सैद्धान्तिक एजेन्डा, बीपी कोइरालाको दर्शनलाई फेरि ब्युँताउनुपर्छ । सबैले अंगीकार गर्नुपर्छ । तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्छ ।
राजनीतिक एजेन्डा र सवालमा धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विषयमा ८० प्रतिशत नेपालीको चित्त बुझेको छैन । जनतामा शंका छ । यसको निदान गर्ने जिम्मा कांग्रेसको हो । अब राजतन्त्र कांग्रेसले बोक्नु हँुदैन । सकियो । तर, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको मामलामा नेपाली कांग्रेसले जनमत संग्रह गराओस् । राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा यसलाई सशक्तरूपमा अगाडि बढाओस् । यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । राष्ट्रको भविष्यको सबाल यो हो ।
इतिहासमा कहिल्यै नहारेको कांग्रेस आफूलाई रुपान्तरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रजातन्त्र एउटा संस्कार, अभ्यास र नैतिकतासमेत रहेछ । यसको जर्गेना गर्न महान् दायित्व पनि अब कांग्रेसकै हो । यस दायित्वबाट आजको नेतृत्व भाग्नु हँुदैन । व्यक्ति आपुूmलाई रूपान्तरण, पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै अघि बढोस् कांग्रेस । हैन भने, अग्रजहरुको आँसुले अहिलेको नेतृत्वलाई पोल्नेछ, पिर्नेछ र कांग्रेस इतिहासमा सीमित हुनेछ । त्यस अवस्थामा राष्ट्र र जनता दुवै हार्ने निश्चित छ । इतिहासमा हिजो आफू हारेर देश र जनतालाई जिताएको यो पार्टी अब आफूले पनि जितोस्, देश र जनताको पनि विजय गराओस् । गम्भीर भएर सोचौँ ।
बेलायतबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा विद्यावारिधि